Nama Abjuu fi Hawwii Mootii Taahuun Maraatee Biyya Goolu! – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooNama Abjuu fi Hawwii Mootii Taahuun Maraatee Biyya Goolu!
Ethiopia PM Abiy Ahmed addressing Moyale residents during the launch of the Moyale One-Stop Border Post.
Nama abjuu fi hawwii mootii tahuun maraatee kana yoo uummatni biyya isaa humnaan qabee waldhaanachuu dadhabe biyyi lafaa itti dirmatee fala barbaaduun dirqama taha. Kononeel Abiyi mootii tahuu isaa gama itti ilaalee gorora cobsuu malee achu gahuuf dhumaatii dhala nama lafa irraa dugugamaa jiru milatee iyyuu ilaaluuf feedhii hin qabu. Gonfoo mootii isaa irra keewwachuuf ari’aa jiru harkaan qabachuu waan taakkoon tokkotti galfatee jiru itti fakkaata.
Dubbii kijibaan uummata biyyaa isaa fi biyya lafaa amma ammaati gara dabarsaa jira. Sagalee babareedaa fi waan dhugaan hojiin argamuu hin dandeenye afuufuun uummatni hawwiin akka badhaadhina inni fiduuf deemuu akka abjuun eegatau gochuu yaaleera. Gochaas jira. Kan caalu immoo waan nagaa buusuuf deemu fakkeessee kijibaan Badhaasa Noobel argachuun isaa jeequmsa uumaa jiruuf akka eehama argatee jirutti fudhachaa jira. Utuu namni sobaan badhaasa kan argatu tahee nama hundaa dura namni badhaasa argatu isa ture.
Isiyaas Afeworqii wajjin walii gale jedhamee badhaasni kennameef amma yoona walii galteen isaanii buuna waliin dhuguu irra drabee waan mul’atamu hin turre. Daangaan biyya lamaan jiduu jiru hin sararamne. Uummataa fi uummatni walitti hin dabalamne. Badhaasni maqaa nagaa buusuun walii galtee nama lamaaf qofa kennamuun baayyee nama gadisiisa. Garuu weerara Tigray irratti godhame booda walii galteen Kononeel Abiyi fi Isiyaas Afeworqii walii galtee biyya Tigray weeraru akka tahe hojiin mul’atee jira. Koreen badhaasa Nooblii namaa qoodu kun of itti qaana’uuf balaalefatamuu qaba. Nama uummata nagaan biyya isaa keessa jiraatu fixuuf walii galtee waraanaa godhuuf maqaa nagaan badhaasa laachuun itti gaaftama dhumaatii dhala nama keessaa qooda fudachuu akka tahe beekuu qabu.
Jarjartiin baadhaasa isaaf kennuu dura hojii isaa sonaan qorachuun barbaachisaa ture. Isaan yoo badhaasa kana fudhate qalbii horatee akka nagaa buusuuf ni gargaara jedhanii haa yaadan malee Kononeel Abiyi gaafa badhaasa Noobel fudhate iyyuu ilmaan Oromoo kumaata hedduun lakkawwan fixee ture. Har’as fixaas jira. Dogogorri warri Badhaasa Nooobli godhan isaaf beekamtii ajjechaa tahee jira. Dhumaatii har’a gahaa jiruufis tahee dhumaatii caalu dhufuu deemuuf yoo namni dhumaa jiru kun isaan himmachuu fi gaafachuuf humna dhabe Waaqayyoo isaan gaafata.
Hitiler akka aangoo qabateen warri Jiwuu qabeenya Uummata Jermanii saammuun biyya keenya hiyyoomsaa jiru yaroo jedhee isaan hadheessu yoo warri Jiwuu kana kan fixxu tahe maalitu nu deebi’e jedhee Uummatni Jermanii itti dhiise. Ergaa aangoo isaa jabeefatee booda nama Jermanii miti biyyi lafaa iyyuu dhidhitee bituuf murteefatee namni dhaabbudhu jedhee itti dubbatu hin argamne. Waraana Addunyaa Lammaffaa keessatti namoota miliyooya hedduun lakkawwamu dhumaniiru. Hitileriis utuu biyya lafaa hin bitne yaroo gabaabaa keessatti lubbuun isaa gabaabate. Biyyi Jermanii illee waan injifatamteef yaroo dheeraaf Bahaa fi Dhiyate amma 11/09/1989 gargar qoodamtee turte.
Kononeel Abiyi jaalala aangoo malee jaalala nama tokko yookaan saba tokko hin qabu. Waan hattoonni warra nafxanyaa gamnummaan oduu isaa jala fiiganii jabaaduu bareedaa jirta jedhaniif waan isa gargaaraa jiran itti fakkaatee yaroof waan isaan barbaadan gutaaf jira. Utuu danda’ee humna Oromoo fi Tigray cabsee itti aansee isaaniinis lafa irraa dugugee akka isaan balleessu beekuu qabu. Garuu aadaa isaanii keessaa inni duraa Mootiif lafa dhugatanii jiraachuu waan taheef isatti sagadanii xinnoo bubbulu taha. Utuu Kononeel Abiyi gahaa iyyuu hin qabanee Amhaartichi Taamaanyi Beeyene jedhamu Washington D. C. keessatti akka jilba Kononeel Abiyi jalatti kufe agarree jirra. Akka isaan yaadan humna Oromoo fi Tigray balleessee mootummaa Amhaaraa wagga shantama dura du’ee owwalamee waan deebisuuf kufee ka’u itti fakkaata.
Dhugaa miti. Warri Amhaara taatanii har’a obbolaa keessan Uummata Tigrayiin haleeli jettan of adaba. Ofitti qana’us qabdu. Uummatni Tigray utuu biyyi lafaa itti duule iyyuu hin badu. Kanaafuu boru isinis tahee ijoolleen keessan waliin yokaas olla taatanii jiraachuuf deemtu. Abiyis akka Hitiler boru hin jiru. Akka harree warri har’a garaa keessan guutachuuf figdan dhala keessaniif waan dabarsitanii darbaa jirtan hubadhaa dha. Har’a Uummata Oromoo fi Beenshaangul irrattis duulee akkuma Tigray sana biyyoo nyaachifna jetanii dhaadachaa jirtu. Warri har’a maqaa Amhaaraan dhaadatan guyyaan isin maaliif Amhaara taanee dhalane jettan akka dhufu hin dhagatiina.
Kononeel Abiyi yoo warra kaan caccabsee mo’e isiniif akka dhufuu beekuu qabdu. Garaa iitti nyaatan malee sammuu itti yaadan Waaqayyoo waan isinii dowwateef nama gadsiiftu. Waan Kononeel Abiyi Dr. Ambaachew Mekonnonii fi General Asaaminew TSigee godhe maaliif dagatuu? Waan kosii taataniif of jala isiin yaasee deema malee mee isiin akka Dr. Ambaachew dhugaa dubadhaa ilaala eessa akka jirtan. Obboolaa keessan Uummata Tigray kan waan baayyee waliin hirmaatan irratti duluun balleessaa guddaa dha. Ammam akka xiqqoo taatan illee ni agrsiisa. Warri har’a ergisaan isiin gargaaran hunduu boru ni galu. Namni isin gargaaru hin jiru. Eessaa haadha keessanii akka seentan barbaadadha. Uummata Oromoo fi Benshaangul irratti dhaadachuu keessan dura lafa keessan Suudaan harkaa deefadha.
Kononeel Abiyi qofaa waan dhabee Mootummaa Eritreaa, Somaliyaa, Sudaan Kibbaa fi Droonii United Arab Emiratiin dhaboo kadhatee Uummata Tigray weeraree jira. Hojiin isaa kun seeraa biiyitiinis tahe biyya lafaan kan argamee hin beekne. Mootummaatn biyya tokko biyya alaa kadhatee uummata biyyaa isaa yaroo ajjeesisuu fi saamsisu dhaga’ees argees hin beeku. Warri uummata sana keessa nagaa isa dhowwatan yoo jiraatan akka hin baqanne balbala naaf cufaa jedhee yoo kadhate ni fakkaata. Garuu biyya isaa keessa fidee ajjeesisuu fi saamsisuun waan yaadamuu danda’u miti. Qabeenyaa fi meeshaa Uummata Tigray kan saamaa jiru waraana Eritrea fi milishaa Amhaara akka tahe biyyi lafaa raga bahaa jira. Haalli kun biyya Itoophiyaa jedhamtu kana eessa geessuuf deema? Namni kun badii guggudaa waan akka(Genocide against humanity, ethnic cleansing and treason against the sovereign Federal State of Ethiopia) waan rawwataa jiruuf fanifamuu qaba.
Kononeel Abiyi Uuummata Tigray cabsuuf adda duraan waraana Isiyaas Afeworqii akka irratti bobaase Uummata Oromoo cabsuu immoo Mootummaa Keeniyaa hawwachaa jira. Kononeel Abiyi gaanfa Arikaa marsaa waraana gochuuf kutatee ka’ee jira. Mootummoonni naannoo gaanfa Afrikaa shira isaa kana keessatti utuu qooda hin fudhatiin duraa dhugaa jiru hubachuu qabu. Namni kun hammenyaa fi dhumaatii Hitiler biyyaa Awuroopaa irratti fide Afrikaa keessatti fiduu deema. Ibdi inni qabsiisaa jiru wal qabatee gaafa xaaxa’u bakka itti dhaabbachuu danda’u hin beekamu.
ABOs tahe Uummata Oromoo Uhuru Keeniyaataa fi Kononeel Abiyi ni balleessu jedhee yaadoo hin qabu. ABO fi Uummata Oromoo irratti Kononeel Abiyi erga gara aangoo dhufee kaasee waraanaa irratti oofaa jira. Fakkeessuuf malee WBOn akka Uummata Oromoo keessa jiru Abiyis tahe Keeniyaataan bareechanii ni beeku. Har’a gaafa humni waraanaa isaa Tigray keessatti daaraa tahaa jiru miti gaafa kumaata dhibaan WBO irratti bobaase iyyuu cabsuu hin dandeenye. Hinumaa iyyuu humni WBO ni dgaaage malee of duuba hin deebine.Kan isaan gochaa jiran waraana qor-qalbii qofa. WBOn sana bira darbee jira. Kononeel Abiyi qofaa hin du’u jedhee Mootummaa naannoo isaa jiran maraa waraanatti galchuu barbaada. Kan dagataa jiran garuu waraana keessaa mootummaan bu’aa argatu akka hin qabne dha. Waraana keessati uummatatu dhuma, qabeenyatu barbada’aa, dingadeetu laamsha’ee jeequmsa fida. Jeequmsa ka’uun mootummaan biyya bulchuu waan hin dandeenyeef ni darbama.
Akkuma agarru Mootummaan PP boola qarqara geessee jirti. Amma yoom uummatni akkana dhumaa fi rakkina kana fakkaatu baatee akka isaan wajjin jiraatu arguuf bara dheeraa eegachuu hin qabnu. PPn Amhaaraa fi Oromoo waan wal dhaban fakkeessanii uummata gowwomsuu sagalee akka walitti dadarbachaa jiran ni aggarra. Dubbichi Tooftaa kijibaan oofaa jiranii dha. Taayeen warra Amhaaraa lolaa jira akka jedhee Uummatni Oromoo isaan ammatu gochuuf waan yaalaa jiran malee dhugaa hin fakkaatu. Amma filmaata godhanii raawwatan nama hidhamuu fi ajjeefamu malee namni hiikamu akka hin jirree waliin murteessanii jiru. Utuu Hooggantoonni Oromoo hidhaa keessa jiranii Uummatni Oromoo filmaata kana keessa qooda fudhata jedhee yaaduu hin danda’a. Uummatni Oromoo hiree isaa murteefachuuf qabsoo isaa jabeessuu qaba. Uummatni Oromoo gaachana isaa WBO akka agrtuu ija isa tiksachuun kan filmaata hin qabne.